Windows media player yimaado badan muuqaalada xiiso leh iyo mid feature sida waa muuqaalaynta ah taas oo ka dhigaysa hubiyo in user waxaa ay keentay in si ay u doortaan deegaanka daaqad ciyaaryahanka si ay u hubiyaan in song waxaa laga maqlaa ruux buuxa iyo qiiro. Waxaa sidoo kale in la xuso in user ee arrintan la xiriira waa in la hubiyo in muuqaalaynta la doortay sida ay nidaam oo looga baahan yahay OS sameeyo.
Qeybta 1: Top 10 Visualizations for Windows Media Player
Qeybta 2: Sida loo shid Visualizations in Windows Media Player
Hoos waxaa ku taxan ugu sareeya 10 visualizations marka la eego magaca, size, sharaxaad gaaban, shaashada iyo URL download,
1. midabo Saciira
Iyada oo laga cabsado oo gobolka ka mid ah muuqaalka farshaxanka muuqaalaynta taas oo ka dhigaysa hubiyo in user helo natiijada ugu wanaagsan iyo sidoo kale helo muuqaalaynta ka soo bixi hubaal sida muuqaalka kore waa cajiib oo wuxuu hubiyaa in dajinta ee file la xaqiijiyay. The midabo kala beddelo halka music la ciyaaray waa wax user kasta oo doonayo iyo muuqaalaynta taas oo ka dhigaysa hubiyo in cabsi badan loo sameeyo oo lacag la'aan ah iyo muuqaalka ciyaaryahanka guud waxaa sidoo kale ka dhigay weyn iyo xiddig.
2. xabadaha Color
Weli taabashada awood badan oo wadnaha visualizations kale oo loo abuuray in la hubiyo in user uu u galay ganacsiga hubaal iyo sabab la mid ah sidoo kale waa in la ogaadaa in user waa in la hubiyo in muuqaalaynta la soo bixi website-ka rasmiga sameeyo Microsoft si uu u hubiyo in si dhab ah iyo version ugu wanaagsan waa ay jiraan in la taageero ciyaaryahanka iyo user sidoo kale helo natiijooyinka ugu fiican marka ay timaado heeso ciyaaro ama files audio kale sida ugu fiican ee hore loo bixiyo qaab of muuqaalaynta this.
3. godxabsiga ku Go'doonsan
Sidoo kale waa mid ka mid ah visualizations in la soo saaray si loo hubiyo in dabeecad dagaal oogidda ee user la cafiyo arrintan la xiriira. Waxaa sidoo kale wuxuu hubiyaa in user helo natiijada sida dajinta iyo rakibo waxaa loo sameeyaa ka website-ka rasmiga ah Microsoft si loo hubiyo in user helo muuqaalaynta ah oo aan wax arrintan iyo dhibaato.
4. Energy Naciima
Full tamarta iyo ruux muuqaalaynta taas oo ka dhigaysa hubiyo in ugu fiican ayaa la siiyaa si user ah oo gobolka ka mid ah saamaynta tahay waxa loo xiraa oo aan wax arrintan iyo dhibaato. Waayo, markii dadka jecel, Cirkuna muuqaalaynta tani waa boon ah iyo sabab la mid ah sidoo kale waa in la ogaadaa in dadka isticmaala ay arrintan la xiriira waa inay hubiyaan in ugu fiican ayaa laga soo degsan oo lagu rakibay sidii ay heer sare ah ayaa lagu talinayaa.
Muuqaalaynta 5. G-Force
In kastoo bixisay muuqaalaynta waxa lagula talinayaa in ay hubiyaan in user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah natiijooyinka tahay wax waqti ah gudahood oo dhan. Dajinta ayaa waxaa si kastaba ha ahaatee sameeyo ka link dibadda oo uu soo kor ku xusan iyo user waxaa lagu wareejiyey website kale oo ay tahay in la soo booqdo si loo hubiyo in ugu wanaagsan ee la sameeyo oo la siiyo user ee arrintan la xiriira.
Waxaa la odhan karaa unbaa sida isku darka dhowr visualizations kale in waxa soo diyaariyey horumarinta kala duwan oo la mid ah ayaa sidoo kale lagu sawiray xajmiga iyo muuqaalka kore ee muuqaalaynta ah. Waa in la soo bixi oo dhan isticmaala kuwa doonaya in ay ku darto wax cusub in ciyaaryahan warbaahinta oo aan wax ka kaaftoomi iyo arrinta. Waxaa shaki la'aan waa muuqaalaynta ugu fiican in loo abuuray weligood:
7. Xasaasi jilicsan
Abuuritaanka ambiance qabow u user muuqaalaynta taas oo ka dhigaysa hubiyo in user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah natiijada tahay oo aan arin kasta oo cad waxaa loogu talagalay dhammaan dadka isticmaala kuwa doonaya in la hubiyo in music jilicsan iyo mid gaabis ah waxaa ciyaaray ee la xiriirta ay doortaan iyo deegaanka guud ahaan. Cabbirka muuqaalaynta sidoo kale waa weyn oo kaas oo ka dhigan tahay in xalka uu yahay cabsi badan oo ay ugu aadayso media player of sifayn kasta oo aan wax arrintan iyo dhibaato. Waa in la soo bixi oo isla goobtii ku rakiban sida ay heer sare ah ayaa lagu talinayaa.
Sidoo kale waa mid ka mid ah kuwa visualizations oo hubiyo in user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah natiijooyinka tahay oo aan wax arrintan oo dhibaato marka ay timaado u music doorashada. Tani waa uun kuwa isticmaala kuwaas oo doonaya in ay dhagaystaan ​​raabka iyo hip hop sida isbedelka lagu gundhig gudahood muuqaalaynta waa inuu xaqiijiyo in user helo shaqo muuqaalaynta ah waqtiga saxda ah, sidaas darteed waxa ay sidoo kale waxaa lagula talinayaa in ay ka soo dejisan muuqaalaynta saxda ah URL taas oo lagu soo kor ku xusan si aad u hesho natiijooyinka ugu fiican.
9. Windows Media 9 taxane
Soo diyaariyay Microsoft muuqaalaynta tani waa kuwa raba in la hubiyo in ciyaaryahanka lagu hayaa fudud oo gaar ah oo isku mar ah. Waa muuqaalaynta ugu fiican in la soo saaro ay ku dhiirigelinayaan ee windows media player oo sidaas daraaddeed waa in lagu daro in la beddelo muuqaalka kore ee xasilloon ciyaaryahanka inta badan aan loogu noqonin in qoraalkii hore.
10. gebogebada II
Muuqaalaynta Tani waxa ay sidoo kale la soo saaray by Microsoft laftiisa iyo sabab la mid ah, waa in la ogaadaa in user ah waa inay hubiyaan in ugu fiican ayaa soo bixi aan lagu kalsoonaan karo oo keliya, laakiin sidoo kale waa in line shuruudaha ciyaaryahanka sida iyo sidoo kale user.
Ka dib waa hab ah in ay tahay in la raaco arrintan la xiriira oo waa mid fudud iyo mid sahlan tahay in la raaco iyo wixii user ka dhigi kara isticmaalka wanaagsan ee habka yahay in la qabto:
1. Hadda suuqa kala ah Player Media u ciyaaro waa in la furay:
Markaas 2.Beerta user waa xaq guji uu furmo suuqa iyo dul istaagin dulqabo in Visualizations tab:
3.Beerta user waa in markaas hubiyo in muuqaalaynta la doonayo la doorto sida rabitaan:
> Resource > Windows > Top 10 Visualizations for Windows Media Player